Office ကိုစက်ကိရိယာများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Xerox DocuPrint P8ex များအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူကိုကူညီပါ
လေဆာပရင်တာ Xerox DocuPrint P8ex.Neobhodimo များအတွက် Xerox DocuPrint P8ex များအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူကိုကူညီပါကားမောင်းသူအဆိုပြုထားကားမောင်းသူတရားဝင်သည်နှင့် 32-bit မှာ operating Windows XP ကို ​​/ 2000 စနစ်များနှင့်သဟဇာတကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Size ကို ...
ပိုပြီးတိကျစွာ Rostelecom IPTV, Router ကို Asus RT-n12 d1 configure ဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြပါ!
ပိုပြီးတိကျစွာ Rostelecom IPTV, Router ကို Asus RT-n12 d1 configure ဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြပါ! PPPoE များအတွက် Asus က RT ကို-N12 D1 connection ကိုထိန်းညှိဖို့, က WAN-ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများ၏စာရင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ item ကို select ရန်လိုအပ်ပေသည်။ tick Include ...
ကျည်တောင့် Fine Refill နှင့်မမျှဆေးသုတ်ရှိကွောငျးပြောပါတယ်? ကူညီ .. ပရင်တာ-ကို Canon PIXMA MG3640
ပြန်လည်ဖြည့်သည့်အရာများ FINE၊ သို့သော်ဆေးသုတ်ခြင်းမရှိဟုဆိုထားပါသည်။ အကူအညီ .. ပရင်တာ -Canon PIXMA MG3640 အားလုံးနီးပါး inkjet Canon တူညီသောမှင်တန်ပြန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည် - အဝါရောင်ခလုတ်ကို 6-10 စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ထားပါ။
အစားထိုးမှင်။ ပရင်တာ Epson L210 အဆိုပါ aftermarket ပရင်တာအတွက်မှင် refill လုပ်နည်း L210
အစားထိုးမှင်။ ပရင်တာ Epson L210 ဘယ်လို aftermarket ပရင်တာ L210 အတွက်မှင် refill တစ်ဦးမှင်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အတွက်လုပ်ကြမနေပါနဲ့, ဒီအရာဖြစ်၏။ ထိုအခါလူအပေါင်းတို့သည်ပရင်တာပျံသန်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဆက်ဆက်နိုင် ...
Epson L120 နှီး Reset သို့မဟုတ်တန်ပြန်သတ္တုတူးဖော်ရေး zeroing
Epson L120 နှီး Reset သို့မဟုတ်တန်ပြန်သတ္တုတူးဖော်ရေး zeroing ပြန်သုံးနိုင်သောပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုမှအဆင်ပြေသည်: link ကိုနှီးပြန်လည်သတ်မှတ်မှု Epson l120 ပေါ်တွင်အလုပ်အစီအစဉ်ကိုပေးပါစီမံကိန်းပြည်သူ့တစ်စုံတစ်ယောက်၏အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကပိတ်ဆို့နေသည် ...
ကူညီပါ! ဒီခေါင်းစဉ်အတွက်အတော်လေးအားကြီးသောမဟုတ်! ဘယ်လိုဆိုးဆေး Refill သည့်အရာတစ်ခု MLT-D111s ???
ကူညီပါ! ဤခေါင်းစဉ်အတွက်တကယ်မခိုင်မာဘူး! အဘယ်အရာ toner သည့်သည့်အရာတစ်ခု MLT-D111s သည့်အရာတစ်ခုကိုပြန်လည်ဖြည့် ??? မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို Samsung toner - 1210, 1710, 4100 toner copyier 3117, P8ex ... One "but ။ " သင့်ရဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာ ...
ပရင်တာတစ်ခု inkjet, laser သို့မဟုတ်အခြားအရာများအပေါ်မူတည်။ ပရင်တာ၏အဘယ်အရာရှိသည်။ 200 ကနေ 900 အထိရူဘယ်, ငါငါကတစ်ဝက် prrerera ဝယ်ကငါ့ system ကိုဝယ် ...
တစ်ဦး plotter ကဘာလဲ, ထိုသို့အဘို့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း
တစ်ဦး plotter ကဘာလဲ, ထိုသို့အဘို့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း PL # 152; Otter (plotter), တစ်ဦး plotter, စက္ကူပေါ်တွင်ရေးဆွဲ, ကားချပ်, ရေးဆွဲ, မြေပုံများ၏အလိုအလျှောက်ကြံစည်မှုများအတွက်ကိရိယာ။ ပထမဦးစွာထင်ရှားအစဉ်အလာအသုံးများကလောင် plotters ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ...
အဘယ်အရာဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု ce283a များအတွက်ပိုကောင်းပါသလဲ
ce283a အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ် toner ကောင်းပါသလဲ။ Damask သံမဏိ။ ရလဒ်ကတော့စူပါပါ သဟဇာတမဖြစ်နိူင်ပါ။ သို့သော် 12A ထူသောသံလိုက်ရိုးတံဖြင့်သာလျှင် XNUMXA ဟုခေါ်သော "စတင်" သည့်အရာတစ်ခု (အပြည့်အဝ) ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ HP က LaserJet Pro ကို MFP M125-M126 PCLmS ဖို့ scan လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ HP က LaserJet Pro ကို MFP M125-M126 PCLmS ဖို့ scan လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ထိုအသင်သည်အဘယ်အရာကို software များကိုအသုံးပြုသနည်း သစ်သားလျော်သော installation ကိုသေချာစေရန်နှင့် ABBYY FineReader 10 ရာထူးလမ်းညွှန်ကြိုးစားကြ: ဆော့ဖ်ဝဲ HP က Scan ကိုအတူစကင်လုပ်နေ ...
ငါရေစိုခံနာရီကြောင်းယုံကြည်သင့်ပါတယ်။ 1946 ကတည်းက hours OMAX
ငါရေစိုခံနာရီကြောင်းယုံကြည်သင့်ပါတယ်။ မြစ်ယနေ့တွေ့ 1946 ကတည်းက hours OMAX ဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းပြီ, ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ဖြစ်ကောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအိပျပါပွီ။ နာရီသင်တစ်ဦးလက်ပတ်နာရီကိုဝယ်လို့ရသောအခါ-Check သို့မဟုတ် ...
123.posle လက်တွေ့ကျကျဗလာ pechataetlist အဆိုပါ MFP №2130အနက်ရောင်မြင်းကောင်ရေ deskjet ပရင်တာ Refill ထံမှကျည်တောင့်ဖြည့်ရန် prompt ။
123.posle လက်တွေ့ကျကျဗလာ pechataetlist အဆိုပါ MFP №2130အနက်ရောင်မြင်းကောင်ရေ deskjet ပရင်တာ Refill ထံမှကျည်တောင့်ဖြည့်ရန် prompt ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးပါဘူး။ အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု, http: //servis-kartridzh.rf/instrukcii/instrukciya-po-zapravke-strujnyx-kartridzhej-hp-123.html ရှင်းလင်းအစီအစဉ်ကိုပါလျှင် ...
အဆိုပါကျည်တောင့် refilling ပြီးနောက် MFP №123မြင်းကောင်ရေ deskjet 2130 ကနေသည့်အရာတစ်ခုကို reset ဖို့ဘယ်လိုအလွတ်ရေးသားခဲ့သည်များနှင့် print ထုတ်မပေးပါဘူး။
အဆိုပါကျည်တောင့် refilling ပြီးနောက် MFP №123မြင်းကောင်ရေ deskjet 2130 ကနေသည့်အရာတစ်ခုကို reset ဖို့ဘယ်လိုအလွတ်ရေးသားခဲ့သည်များနှင့် print ထုတ်မပေးပါဘူး။ HP ကပရင်တာအတွက်ကျည်တောင့်အတွက်မှင်များ၏ဘလောက်ရဲ့အဆုံးမှာ print ထုတ်ကြဘူး။ အဆိုပါပရင်တာအစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည် ...
ပရင်တာအမှား။ ပြီးသားကိုဒီမှာအကြံပေးပရင်တာ, အသုံးပြုမှု driverplus.ru ဖွယ်ရှိပရင်တာမှ USB အဘုတ်အဖွဲ့ခေါက်, ဒီမော်ဒယ်ပုံမှန်ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ရန်လည်းမရှိ။ HP က၏ site ပေါ်တွင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ ...
သုံးရောင်ခြယ်,0အမှား
tricolor, အမှား0သာသူတို့အား။ Support က channel-error 0. အားလုံးကိုပြမထားဘူး။ ဘာလုပ်သင့်လဲ။ - ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်သည်အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေပေးပြီးထုတ်လွှင့ ်၍ မရနိုင်ပါ။
စက္ကူပုံစံ A4 ၏ပျမ်းမျှ stack မည်မျှရှိသနည်း
စက္ကူပုံစံ A4 ၏ပျမ်းမျှ stack မည်မျှရှိသနည်း လွင်ပြင်စက္ကူတစ်သမားရိုးကျဗူးများနှင့်အရာစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါတယ်အတွက်မည်မျှရှိသနည်း မည်မျှစာရွက်များစက္ကူနှင့်ဤတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အချို့ရှိနိုင်ပါသည်နေသော်လည်း ...
အဆိုပါပရင်တာမဟုတ်တော့ဘာလုပ်ရမှန်း, စက္ကူဖမ်းပြီး? အဆိုပါချုပ်ကိုင် roller ဒါမှမဟုတ်စက္ကူ feed ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။ သူတို့ကအတိအကျအဘယ်ကြောင့်ဖမ်းမရှိကြပေ။ ပုံမှန် roller သူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နံရိုးရှိသည်, ချောမွေ့ပုံသဏ္ဍာန်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်နေကြသည် ...
ပြတင်းပေါက် 10 အပေါ် Rassharny ပရင်တာ Windows XP မချိတ်ဆက်! အဘယ်သူသည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ပြီလော
ပြတင်းပေါက် 10 အပေါ် Rassharny ပရင်တာ Windows XP မချိတ်ဆက်! အဘယ်သူသည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ပြီလော တရားဝင်) ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး) ဒါ 10ke ပေါ်တွင်အာကာသယာဉ်ထောက်ခံမှု SMBv1 ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ မရ သို့သော်) စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး) အနိုင်ရရှိ XP တွင် go ...
အဘယ်ကြောင့်အချို့သောလိုင်းများသုံးရောင်ခြယ်တီဗီကိုပြသသည်မဟုတ်လော ဒီတော့ note ကိုယူပါ။ အဆိုပါ encoded ရုပ်သံလိုင်း DRE အများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်: Banal အဆိုပါ receiver ကို socket ထဲကဆွဲထုတ်ဖို့ကိုဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်ဆွဲထား ...
အရွယ်အစားအဓိက Are ???
အရွယ်အစားအဓိက Are ??? အီတလီစာရေးကိရိယာ stapler Primula 6, bracket ကဒါပေမယ့်။ 10 ကြီးတွေ, သူ့အဘို့အဘယ်သို့ပြုသနည်း အများအားဖြင့်, အ stapler အပေါ်, သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးပေါ်ကွင်းခတ်တဲ့အရေအတွက်ကတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား ...
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,243 စက္ကန့်ကျော် Generate ။